I-Life annuity: iyini, izinhlobo nokuthi uyiqasha kanjani igxathu negxathu | Ezezimali Zomnotho
Uma ukhathazekile ngekusasa lakho, uma ucabanga ukuthi kungenzeka ungabi nayo impesheni ngemuva kokufinyelela eminyakeni yobudala yokuthatha umhlalaphansi, ifomula lokonga elingakusiza ulale ngokuthula kungaphezulu nge-life annuity.
Kodwa, Yini impesheni? Yenzelwe ini? Ilawulwa kanjani? Uma ufuna ukwazi konke okudingayo mayelana nomshuwalense we-life annuity, lapha uzothola lonke ulwazi.
1 Yini impesheni
2 Kungani kufanele impesheni ibe nesithakazelo?
3 Izinhlobo zempesheni
4 Imihlomulo yempesheni
5 Ungayiqasha kanjani impesheni
5.1 Hlola ukukhushulwa kwabomshwalense abahlukene
5.2 Qaphela ukuphrinta okuhle
5.3 Njalo khetha umshwalense owaziyo ukuthi uzosebenza
Impesheni, eyaziwa nangokuthi umshwalense wempesheni, empeleni iyi- umkhiqizo wokonga ocatshangelwa esigabeni ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi. Ngalokhu, umuntu uqinisekisa ukuthi uzothola iqoqo lezikhathi ezithile kuyo yonke impilo yakhe, ngendlela yokuthi imali efakwa kulowo mshuwalense isetshenziswe kamuva ukuyiguqula ibe yimali engenayo futhi ibhekane nokuqoqwa kwalokho ozokuthola inyanga nenyanga .
Ngamanye amagama, kufana nempesheni oyakhayo, lapho kufanele unikele ngemali yokuqala (imali ebalulekile) bese umshwalense kuzodingeka akhokhe inani elithile ngezikhathi ezithile kuze kube yilapho umuntu onenkontileka efa (ngaphandle uma kuneminye imibandela kuyasungulwa, njengokuthi izindlalifa nazo ziyakhokhelwa).
Le mali kuzoba yiyo oke wayinikela ekuqaleni ukuze ngokuhamba kwesikhathi umshwalense enze isiqiniseko sokuthi uyayithola, okuvame kakhulu ukuthola imali yenyanga (kodwa inkokhelo eyodwa nayo ingasungulwa).
Inzuzo abanayo ukuthi imali onayo, uma ifakwe ngale ndlela, iba sengcupheni ephansi yokulahlekelwa inani ngenxa yokwehla kwamandla emali, okusiza ukuthi uthole imali eningi ngemali onayo.
Kungani kufanele impesheni ibe nesithakazelo?
Manje njengoba usuyibonile ukuthi iyini impesheni, ungazibuza yini iphrofayili enesithakazelo kubo, okungukuthi, labo abangacabanga ukuba ne-life annuity.
Ngokuvamile, kuzoba yibo bonke abantu abafuna ukuhlela ikusasa labo esikhathini esizayo. Kepha, ukwenza njalo, kuyadingeka ukuthi ube nemali enkulu, ngoba, ngaphandle kwalokho, kunzima kakhulu ukucabanga.
Okunye okufanele kubhekwe ngempilo yempesheni ukuthi ayikho indlela eyodwa kuphela, kepha iningana layo. Ngokuqondile, okuvame kakhulu yilokhu okulandelayo:
Usonhlamvukazi budlulisiwe. Lolu hlobo lwempesheni lunenkinga yokuthi imali etshaliwe ayikwazi ukubuyiselwa, ngendlela yokuthi i-premium yokuqala, uma kwenzeka idlula emhlabeni, noma uma ufuna ukukhansela irenti, awukwazanga ukuyithola. Kepha, futhi, umshwalense uyaqinisekisa ukuthi unikela ngentela ephakeme kunejwayelekile. Ilungele labo abangenazo izinkinga ezinkulu zempilo futhi abangayithokozela leyo mali isikhathi eside (ukuze ikhokhe).
Imali engenayo njalo. Eyaziwa nangokuthi inhlokodolobha ebekiwe. Kubonakala ngoba i-premium yokuqala inikezwa kepha, ngokungafani neyangaphambilini, kungenzeka ukuthi ukhansele umshwalense futhi uthole imali oyikhokhile. Inkinga ukuthi, uma kuziwa ekutholeni leyo mali, kuzokwenziwa ngokususelwa kunani lemakethe, elingadala ukuthi kutholakale imali encane kunaleyo eyayinikelwe ngaleso sikhathi.
Imodi exubile. Kulokhu kuyinhlanganisela yazo zombili izimpesheni zangaphambilini. Kulokhu, imali ingatholwa; Kodwa-ke, uma kwenzeka kushona, abahlomuli bazothola kuphela iphesenti, elizokwehla futhi njengoba isikhathi sihamba.
Uma ungakaqiniseki ngempesheni, kungenzeka ukuthi ukwazi ukuthi izinzuzo ezikunikezayo kuzokwenza ukuthi uthathe isinqumo ngandlela thile. Ngakho-ke, izinzuzo ongazithola yilezi:
Ukwazi ukukhetha ezinye izindlela ezihlukile. Futhi kunezimpesheni ezahlukahlukene, ngakho-ke akudingeki ukuthi uhlale nomkhiqizo owodwa kuphela, kepha ungakhetha lowo ofanele wena.
Imali ekhokhwa ngonyaka eyedlule. Lokhu kuzoba kuphela uma kukhona umshuwalense wokufa, ngoba, uma ukhona, ungakhetha izinzuzo zentela zomkhiqizo (okungenzeki uma ungenawo.
Ikunikeza ukuphepha. Ukuba nemali yempesheni kukusiza ukuthi ube nokuthula lapho ubhekene nokuthatha umhlalaphansi. Futhi ukuthi ukuba nomshuwalense oqinisekisa ukukhokhwa kwemali yanyanga zonke, ngeke kudingeke ukhathazeke ngokuthola imali.
Ungahlela ifa. Impesheni ingasebenza njengefa lezindlalifa, ngendlela yokuthi leyo mali ishiyelwe umuntu.
Ungayiqasha kanjani impesheni
Uma sibheka ukuthi asazi ukuthi uhlelo lwempesheni luzohlala lusebenza eSpain eminyakeni eminingana, noma uma lokhu kuzofaneleka lapho sifinyelela esigabeni sokuthatha umhlalaphansi, abantu abaningi bakhetha khipha umshwalense we-life annuity ukuqinisekisa ukuthi imali engenayo yenyanga iyatholakala kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakhe noma ngaphesheya kwalokho, kwezindlalifa.
Kepha yini okufanele uyenze ukuthola lokhu?
Hlola ukukhushulwa kwabomshwalense abahlukene
Abahlinzeki bemishwalense, kanye namabhange, bangaba nalolu hlobo lwensizakalo kukhathalogi yabo, futhi kungahle kuthakazelele ukutadisha eziningana zazo ukuthola ukuthi yini abakunikeza yona kanye nezidingo okufanele uhlangabezane nazo ukuze uzithole.
Ungahlali neyokuqala oyibonayo, kungcono uthathe isikhathi sakho wenze ucwaningo oluncane ngaphambi kokwenza isinqumo ngoba, njengoba sesibonile, ezinye azikwazi ukukhanselwa, futhi kungaba wutshalomali olubi uma ungaqaphile .
Qaphela ukuphrinta okuhle
Kufanele uqaphele ngaleyo mininingwane emincane engahle ingacacisi lapho ikunikeza imininingwane, kepha ube usukhona esivumelwaneni. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi uchithe isikhathi sakho ufunda ngokucophelela inkontileka oyinikwa wena futhi ubuze nemibuzo engase ivele (noma ungayisayini ekugcineni). Uma kunezinto ongazazi kahle, ungazisayini.
Njalo khetha umshwalense owaziyo ukuthi uzosebenza
Ngoba kuthiwani uma umshwalense enza impesheni abese enyamalala, abhange, noma afayele ukuqothuka? Yebo, ngeke ukwazi ukukhokhisa, noma ngabe ufuna malini.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Ukuphela kwenyanga » Impesheni